Gaon Chart မှာ သမိုင်းသစ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ EXO ရဲ့ Baekhyun | News Bar Myanmar
Gaon Chart မှာ သမိုင်းသစ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ EXO ရဲ့ Baekhyun
EXO ရဲ့ Baekhyun ကတော့ Gaon Chart မှာ သမိုင်းသစ်ရေးထိုးလိုက်နိုင်ပြန်ပါပီနော်။ အခုဆိုရင်တော့ Baekhyun ဟာ Gaon chart မှာ ပထမဆုံး Triple Platinum Certification ရတဲ့ ပထမဆုံး Solo Artist ဖြစ်လာပါပီ။
Gaon Chart ဟာ ၂၀၁၈ မှစလို့ Certification System ကိုစတင်ခဲ့တာပါ။ အယ်လ်ဘမ်တွေအတွက် ရောင်းအား 250,000 ပြည့်တိုင်း Platinum Certification သတ်မှတ်ထားပြီး၊ သီချင်းတွေအတွက်တော့ 100 million streams ၊ ဒါမှမဟုတ် 2.5 သန်း Download ပြည့်တိုင်း Platinum certification ပေးအပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်မှာတော့ Gaon Chart မှ Baekhyun ရဲ့ နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ် ဖြစ်တဲ့ “Delight” ဟာ ရောင်းအား 750,000 ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက် Triple Platinum Certification ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုရရှိမှုဟာ Solo Artist တစ်ယောက်အတွက် တော့ ပထမဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ်တန်း Chart တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gaon Chart မှာ သမိုင်းသစ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ Baekhyun အတွက်တော့ ပရိသတ်တွေက ဂုဏ်ယူနေမှာ သေချာပါတယ်။ CONGRATULATIONS Baekhyun and EXO-Ls!
(Zawgyi) Gaon Chart မွာ သမိုင္းသစ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ EXO ရဲ့ Baekhyun
EXO ရဲ့ Baekhyun ကေတာ့ Gaon Chart မွာ သမိုင္းသစ္ေရးထိုးလိုက္နိုင္ျပန္ပါပီေနာ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ Baekhyun ဟာ Gaon chart မွာ ပထမဆုံး Triple Platinum Certification ရတဲ့ ပထမဆုံး Solo Artist ျဖစ္လာပါပီ။
Gaon Chart ဟာ ၂၀၁၈ မွစလို႔ Certification System ကိုစတင္ခဲ့တာပါ။ အယ္လ္ဘမ္ေတြအတြက္ ေရာင္းအား 250,000 ျပည့္တိုင္း Platinum Certification သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သီခ်င္းေတြအတြက္ေတာ့ 100 million streams ၊ ဒါမွမဟုတ္ 2.5 သန္း Download ျပည့္တိုင္း Platinum certification ေပးအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္မွာေတာ့ Gaon Chart မွ Baekhyun ရဲ့ ေနာက္ဆုံးအယ္လ္ဘမ္ ျဖစ္တဲ့ “Delight” ဟာ ေရာင္းအား 750,000 ေက်ာ္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ Triple Platinum Certification ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုရရွိမႈဟာ Solo Artist တစ္ေယာက္အတြက္ ေတာ့ ပထမဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ္တန္း Chart တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Gaon Chart မွာ သမိုင္းသစ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့တဲ့ Baekhyun အတြက္ေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ဂုဏ္ယူေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ CONGRATULATIONS Baekhyun and EXO-Ls!
Next BLACKPINK Rosè ရဲ့ Instagram Live ကိုလာကြည့်ခဲ့တဲ့ One Direction အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Niall Horan »
Previous « Hanyang Cyber University မှာ MBA ဘွဲ့ကို ယူကြဦးမယ့် BTS အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦး